विश्वमा ४ करोड बढीले जिते कोरोना, कति पुगे संक्रमित र मृतक ? – News Dainik
विश्वमा ४ करोड बढीले जिते कोरोना, कति पुगे संक्रमित र मृतक ?
News desk ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०९:४५ समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण जित्नेको संख्या ४ करोड नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ लाख ५२ हजार ६०५ जना संक्रमण मुक्त भएसँगै विश्वभर कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या ४ करोड ८० हजार पुगेको हो । निको हुनेको यो संख्या कुल संक्रमितका आधारमा ६९ प्रतिशत हो ।
विश्व स्वाथ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कूल कोरोना संक्रमितको संख्या ५ करोड ६६ लाख २३ हजार ६४३ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वमा ६ लाख २० हजार ७४४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ५१६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
कोरोनाका कारण हालसम्म विश्वमा १३ लाख ५५ हजार ९६३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमण अमेरिका, भारत, ब्राजिल लगायत देशमा भएको छ ।
अघिल्लॊ प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले मंसिर २९ मा कविता महोत्सव आयोजना गर्ने
पछिल्लॊ भारतमा कोरोनाबाट २४ घण्टामा ५६४ जनाको मृत्यु